Okufanele ukwenze ngemuva kokuqeqeshwa: amathiphu ayi-11 wokuzama ngemuva kokuqeqeshwa
FR : https://www.hebergementwebs.com/sante/que-faire-apres-l-entrainement-11-conseils-a-essayer-apres-l-entrainement
EN : https://www.hebergementwebs.com/health/what-to-do-after-training-11-tips-to-try-after-training
ES : https://www.hebergementwebs.com/salud/que-hacer-despues-del-entrenamiento-11-consejos-para-probar-despues-del-entrenamiento
CS : https://www.hebergementwebs.com/zdraví/co-delat-po-cviceni-11-tipu-k-vyzkouset-po-cviceni
BS : https://www.hebergementwebs.com/zdravlje/sta-raditi-nakon-treninga-11-savjeta-za-isprobavanje-nakon-treninga
BN : https://www.hebergementwebs.com/স্বাস্থ্য/11-টিপস-পরে-ওয়ার্কআউট-করার-পরে-কী-কী-করতে-হবে
EL : https://www.hebergementwebs.com/Υγεία/τι-να-κάνετε-μετά-προπόνηση-11-συμβουλές-να-δοκιμάστε-μετά-προπόνηση
DE : https://www.hebergementwebs.com/gesundheit/was-zu-tun-nach-dem-training-11-tipps-zum-ausprobieren-nach-dem-training
FA : https://www.hebergementwebs.com/سلامتی/چه-کارهایی-باید-انجام-شود-بعد-از-تمرین-11-نکته-امتحان-کنید-بعد-از-تمرین
GD : https://www.hebergementwebs.com/slàinte/de-ri-deanamh-as-obair-11-tips-to-try-after-workout
CA : https://www.hebergementwebs.com/salut/que-fer-despres-de-l-entrenament-11-consells-per-provar-despres-de-l-entrenament
DA : https://www.hebergementwebs.com/sundhed/hvad-skal-man-gøre-efter-træning-11-tip-til-at-prøve-efter-træning
CY : https://www.hebergementwebs.com/iechyd/beth-i-wneud-ar-ol-ymarfer-11-awgrymiadau-i-geisio-ar-ol-ymarfer
HU : https://www.hebergementwebs.com/egészség/mit-csinalni-edzes-utan-11-tipp-kiprobalni-edzes-utan
FI : https://www.hebergementwebs.com/terveys/mita-to-work-after-work-11-tips-to-try-after-workout
AF : https://www.hebergementwebs.com/gesondheid/wat-om-te-doen-na-oefensessie-11-wenke-om-na-oefensessie-te-probeer
AM : https://www.hebergementwebs.com/ጤና/ከ-የአካል-ብቃት-እንቅስቃሴ-በኋላ-ምን-ማድረግ-11-የአካል-ብቃት-እንቅስቃሴ-ሙከራ-ለመሞከር-ምክሮች
HT : https://www.hebergementwebs.com/sante/sa-a-fe-apre-antrennman-11-konsey-a-eseye-apre-antrennman
HA : https://www.hebergementwebs.com/lafiya/abin-yi-bayan-motsa-jiki-11-nasihu-don-gwada-bayan-motsa-jiki
HE : https://www.hebergementwebs.com/בְּרִיאוּת/מה-לעשות-אחרי-האימון-11-טיפים-לנסות-אחרי-האימון
EU : https://www.hebergementwebs.com/osasuna/entrenamenduaren-ondoren-zer-egin-11-aholku-entrenamendu-ondoren-probatu-ahal-izateko
BE : https://www.hebergementwebs.com/Здароўе/што-рабіць-пасля-трэніроўкі-11-парады-паспрабаваць-пасля-трэніроўкі
CO : https://www.hebergementwebs.com/salute/chi-fa-dopu-allenamentu-11-cunsiglii-per-pruva-dopu-allenamentu
FY : https://www.hebergementwebs.com/sûnens/wat-te-dwaan-nei-training-11-tips-om-te-besykjen-nei-training
GU : https://www.hebergementwebs.com/આરોગ્ય/વર્કઆઉટ-પછી-શું-કરવું-તે-11-ટીપ્સ-પછી-વર્કઆઉટ-કરો
ID : https://www.hebergementwebs.com/kesehatan/apa-yang-harus-dilakukan-setelah-latihan-11-tips-untuk-coba-setelah-latihan
EO : https://www.hebergementwebs.com/sano/kion-fari-post-ekzercado-11-konsiloj-provi-post-ekzercado
GA : https://www.hebergementwebs.com/sláinte/cad-le-deanamh-tar-eis-workout-11-leideanna-le-triail-tar-workout
HR : https://www.hebergementwebs.com/zdravlje/sto-uciniti-nakon-treninga-11-savjeta-za-isprobavanje-nakon-treninga
GL : https://www.hebergementwebs.com/saúde/que-facer-despois-do-adestramento-11-consellos-para-probar-despois-do-adestramento
ET : https://www.hebergementwebs.com/tervis/mida-teha-parast-trenni-11-nippi-proovida-parast-trenni
BG : https://www.hebergementwebs.com/Здраве/какво-да-правя-след-тренировка-11-съвета-за-опитване-след-тренировка
AR : https://www.hebergementwebs.com/صحة/ما-يجب-القيام-به-بعد-التمرين-11-نصيحة-للمحاولة-بعد-التمرين
AZ : https://www.hebergementwebs.com/sağlamlıq/məsqdən-sonra-nəyi-etməli-məsqdən-sonra-nəyi-sinamaq-ucun-11-tovsiyə
IT : https://www.hebergementwebs.com/salute/cosa-fare-dopo-l-allenamento-11-consigli-da-provare-dopo-l-allenamento
MS : https://www.hebergementwebs.com/kesihatan/what-to-do-after-workout-11-tips-to-try-after-workout
NL : https://www.hebergementwebs.com/gezondheid/wat-te-doen-na-de-workout-11-tips-om-te-proberen-na-workout
RU : https://www.hebergementwebs.com/Здоровье/что-делать-после-тренировки-11-советов-попробовать-после-тренировки
PT : https://www.hebergementwebs.com/saúde/o-que-fazer-depois-do-treino-11-dicas-para-tentar-depois-do-treino
IG : https://www.hebergementwebs.com/ahụike/ihe-ime-eme-eme-mgbatị-11-atụmatụ-na-agbalị-mgbe-mgbatị
KA : https://www.hebergementwebs.com/ჯანმრთელობა/რა-უნდა-გააკეთო-ვარჯიშის-შემდეგ-11-რჩევა-ცადე-ვარჯიშის-შემდეგ
LV : https://www.hebergementwebs.com/veselība/ko-darit-pec-trenina-11-padomi-izmeginat-pec-trenina
RW : https://www.hebergementwebs.com/ubuzima/icyo-gukora-nyuma-y-imyitozo-11-inama-yo-kugerageza-nyuma-y-imyitozo
MR : https://www.hebergementwebs.com/आरोग्य/वर्कआउट-नंतर-वर्कआउट-टू-टू-टू-करा-करा
OR : https://www.hebergementwebs.com/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ/କ’ଣ-କରିବା-ପରେ-ବ୍ୟାୟାମ-11-ଟିପ୍ସ-ଚେଷ୍ଟା-ପରେ-ବ୍ୟାୟାମ-ପରେ-|
MT : https://www.hebergementwebs.com/saħħa/x-ghandek-taghmel-wara-l-workout-11-tips-biex-tipprova-wara-workout
IS : https://www.hebergementwebs.com/heilsa/hvað-a-að-gera-eftir-æfingu-11-rað-til-að-profa-eftir-æfingu
SD : https://www.hebergementwebs.com/صحت/ڇا-پٺيان-ڪم-11-صلاحون-ڪوشش-ڪري-ورزش-کان-پوءِ
NY : https://www.hebergementwebs.com/thanzi/chochita-pambuyo-chochita-11-maupangiri-kuyesa-pambuyo-kulimbitsa-thupi
NO : https://www.hebergementwebs.com/helse/hva-a-gjøre-etter-trening-11-tips-for-a-prøve-etter-trening
PL : https://www.hebergementwebs.com/zdrowie/co-zrobic-po-treningu-11-wskazowek-jak-wyprobowac-po-treningu
PS : https://www.hebergementwebs.com/روغتیا/د-ورزش-نه-وروسته-د-11-لارښوونې-له-وروسته-له-وروسته-ورزش
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಆರೋಗ್ಯ/ತಾಲೀಮು-ನಂತರ-ಏನು-ಮಾಡಬೇಕೆಂದು-11-ಸಲಹೆಗಳು-ತಾಲೀಮು-ನಂತರ-ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
MY : https://www.hebergementwebs.com/ကျန်းမာရေး/အဘယ်အရာကို-to-do-ပြီးနောက်-လေ့ကျင့်ခန်း-11-အကြံပေးချက်များ-to-try-ပြီးနောက်-လေ့ကျင့်ခန်း
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਸਿਹਤ/11-ਸੁਝਾਅ-ਤੋਂ-ਬਾਅਦ-ਵਰਕਆਉਟ-ਤੋਂ-ਬਾਅਦ-ਕਰਨਾ
ML : https://www.hebergementwebs.com/ആരോഗ്യം/വ്യായാമത്തിന്-ശേഷം-എന്തുചെയ്യണം-11-നുറുങ്ങുകൾ-വ്യായാമത്തിന്-ശേഷം-ശ്രമിക്കുക
SI : https://www.hebergementwebs.com/සෞඛ්‍යය/කළ-යුතු-දේ-වැඩ-කිරීමෙන්-පසු-11-ඉඟි-උත්සාහ-කිරීමට-ව්‍යායාමයෙන්-පසු
LT : https://www.hebergementwebs.com/sveikata/ka-daryti-po-treniruotes-11-patarimu-isbandyti-po-treniruotes
JA : https://www.hebergementwebs.com/健康/ワークアウト後に何をすべきか-11-ワークアウト後に試すためのヒント
LB : https://www.hebergementwebs.com/gesondheet/wat-ze-maachen-no-workout-11-tipps-ze-probeieren-no-workout
KO : https://www.hebergementwebs.com/건강/운동-후-수행-할-작업-11-운동-후-시도-할-수있는-팁
MN : https://www.hebergementwebs.com/Эрүүл-мэнд/Дасгал-хийсний-дараа-юу-хийх-вэ-11-дасгал-хийхийг-хичээх-хэрэгтэй
KY : https://www.hebergementwebs.com/Ден-соолук/Машыгуудан-кийин-эмне-кылуу-керек-11-кеңештер-Машыгуудан-кийин-аракет-кылып-көрүңүз
KK : https://www.hebergementwebs.com/Денсаулық/Жаттығудан-кейін-не-істеу-керек-11-жаттығудан-кейін-көруге-болатын-кеңестер
SV : https://www.hebergementwebs.com/hälsa/vad-att-gora-efter-traning-11-tips-att-prova-efter-traning
TR : https://www.hebergementwebs.com/sağlık/egzersiz-sonrasi-yapilmasi-gerekenler-11-egzersiz-sonrasi-denenmesi-gereken-ipuclari
ST : https://www.hebergementwebs.com/bophelo-bo-botle/eng-to-do-after-workout-11-malebela-a-ho-leka-kamora-boikoetliso
VI : https://www.hebergementwebs.com/sức-khỏe/diều-cần-lam-sau-tập-luyện-11-mẹo-cần-thử-sau-tập-luyện
YI : https://www.hebergementwebs.com/געזונט/וואָס-צו-טאָן-נאָך-ווערקאַוט-11-עצות-צו-פּרובירן-נאָך-ווערקאַוט
SL : https://www.hebergementwebs.com/zdravje/kaj-narediti-po-treningu-11-nasveti-poskusiti-po-treningu
ZH : https://www.hebergementwebs.com/健康/锻炼后该做什么-锻炼后尝试的-11-个提示
SO : https://www.hebergementwebs.com/caafimaadka/maxaa-la-qaban-karaa-tababarka-kadib-11-talooyin-oo-ah-isku-day-kadib-jimicsiga
UR : https://www.hebergementwebs.com/صحت/ورزش-کے-بعد-کیا-کرنا-ہے-11-ورزشوں-کے-بعد-ورزش-کرنا-ہے
SQ : https://www.hebergementwebs.com/shëndeti/cfare-te-besh-pas-stervitjes-11-keshilla-per-ta-provuar-pas-stervitjes
TA : https://www.hebergementwebs.com/ஆரோக்கியம்/வொர்க்அவுட்டிற்குப்-பிறகு-என்ன-செய்ய-வேண்டும்-11-உதவிக்குறிப்புகள்-முயற்சிக்க-முயற்சித்த-பிறகு
XH : https://www.hebergementwebs.com/impilo/yintoni-yokwenza-emva-kokuzilolonga-11-iingcebiso-ukuzama-emva-kokuzilolonga
SW : https://www.hebergementwebs.com/afya/nini-cha-kufanya-baada-ya-mazoezi-11-kwa-kujaribu-baada-ya-mazoezi
UG : https://www.hebergementwebs.com/ساغلاملىق/چېنىقىشتىن-كېيىن-نېمە-قىلىش-كېرەك-،-11-چېنىقىشتىن-كېيىن-سىناپ-بېقىش
TK : https://www.hebergementwebs.com/saglyk/turgenlesikden-son-name-etmeli-11-maslahatlar-synap-gormekden-son-name-etmeli
TE : https://www.hebergementwebs.com/ఆరోగ్యం/ఏమి-చేయాలో-తర్వాత-వ్యాయామం-11-చిట్కాలు-ప్రయత్నించండి-తర్వాత-వ్యాయామం
UK : https://www.hebergementwebs.com/Здоров'я/що-робити-після-тренування-11-підказки,-як-спробувати-після-тренування
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/健康/鍛煉後該做什麼-鍛煉後嘗試的-11-個提示
TT : https://www.hebergementwebs.com/Сәламәтлек/күнегүләрдән-соң-нәрсә-эшләргә
YO : https://www.hebergementwebs.com/ilera/kini-lati-ṣe-lẹhin-adaṣe-11-awọn-imọran-lati-gbiyanju-lẹhin-adaṣe
TG : https://www.hebergementwebs.com/Тандурустӣ/пас-аз-машқ-чӣ-кор-кардан-лозим-аст-11-маслиҳатҳо-барои-санҷиш-пас-аз-машқ
Okwenzayo ngemuva kokuzivocavoca kwakho kuyingxenye ebalulekile yokuthola imiphumela, efana ukuzuza kwemisipha nokuncipha, ngenkathi kunciphisa ubuhlungu bemisipha. Inqubo yokuzivocavoca emva kokuzivocavoca futhi isiza ekugcineni amazinga kagesi afanele njengoba ubuyisa amandla akho, okwenza kube lula ukunamathela esimisweni sakho sokuqina. Le ndatshana ihlola izinyathelo okufanele uzithathe ngemuva kokuzivocavoca umzimba ukukhulisa imiphumela yakho. Funda ukuze uthole ukuthi ungalakha kanjani uhlelo olusebenzayo lokuqala inqubo yokutakula ngemuva kokuzivocavoca.
Amathiphu ajwayelekile okulandela
1. Hlala unomswakama
Ukubuyiselwa kwamanzi emzimbeni kubalulekile, ikakhulukazi uma ubuzijwayeza kakhulu noma ujuluka. Ukugcwalisa amazinga akho oketshezi kuthuthukisa ukuguquguquka kwemisipha, kwakha amandla kanye kuvimbela ubuhlungu bemisipha .
Phuza okungenani ama-ounces angu-16 wamanzi noma iziphuzo ezinempilo , njengamanzi kakhukhunathi, itiye eliluhlaza noma elimnyama, nobisi lwe-chocolate. Noma ungakhetha isiphuzo sezemidlalo esinoshukela ophansi. Lezi ziphuzo zine-electrolyte, njenge-potassium ne-sodium, engavimbela futhi ikhulule amajaqamba.
Gwema iziphuzo ezinoshukela kakhulu, ezine-caffeine futhi ezinotshwala, ezingadala ukuthi
. 2. Yidla umthamo onempilo
Hlela ukudla okulula noma ukudla
kungakapheli imizuzu engu-45
yokuphela kokuzivocavoca kwakho. Lokhu kuzosiza ukugcwalisa izitolo zamandla emisipha bese kuqala inqubo yokutakula. Yidla ukudla okuqukethe ama-carbohydrate namaprotheni.
Amakhabhohayidrethi asiza ukubuyisa amazinga e-glycogen ukuze ukwazi ukuvuselela amandla akho. Amaprotheni asiza ukuvuselelwa kwemisipha futhi anikeze i-asidiama-amine asiza ukulungisa nokwakha kabusha imisipha. 3. Yenza ukuzivocavoca okulula ngezinsuku zokuphumula
Noma imisipha yakho idinga isikhathi sokululama ngemuva kokuzivocavoca kanzima, usengakwazi ukuzivocavoca umzimba ngezinsuku zokululama, njengokuhamba, ukubhukuda noma i-yoga. Ukuhlanganyela
kungasiza ekuvikeleni ukwakheka kwe-lactic acid, ukukhipha ubuthi, nokukhuthaza ukusakazeka. Ukushintshashintsha ukusebenzisa kwakho kungakusiza nokuthi ukhombe amaqembu emisipha ehlukene futhi usebenzise imisipha yakho ngezindlela ezahlukene.
4. Khumbula ukwehlisa umoya Njalo qeda ukuzivocavoca kwakho ngesikhathi esipholile, esivumela ukuthi izinga lokushaya kwenhliziyo yakho libuyele kancane ezingeni elijwayelekile. Kuyasiza futhi ukunqanda ukuqoqwa kwegazi emikhawulweni engezansi, okungadala ikhanda elikhanyayo noma elikhanyayo.
Ukupholisa okugunyaziwei-oprie ingasiza futhi ekunciphiseni ukucindezeleka, ukuvimbela ubuhlungu bemisipha, nokuvikela ukulimala. Cabanga ukuphetha nge- savasana ukukhuthaza inhlalakahle ejwayelekile.
Amathiphu okwakha imisipha
5. Beka phambili amaprotheni
ukulungisa nokwakha kabusha imisipha
, khetha ukudla okuqukethe ama-carbohydrate enempilo kanye namaprotheni asezingeni eliphakeme. Izinketho zamaphrotheni ezisiza ukwakha imisipha zifaka phakathi:
inyama enyama encikile
amabha wamaprotheni aphansi
6. Khetha ama-Carbs ngokuhlakanipha
Amakhabhohayidrethi asiza imisipha yakho ukuthi ibuye ngenkathi amaprotheni esekela ukukhula kwemisipha. Amakhabhohayidrethi ongawadla ngemuva kokuzivocavoca afaka phakathi:
lonke ipasta okusanhlamvu
isinkwa sikakolweni sonke
6. Zama isengezo
Unganothisa ukudla kwakho ngokunyakaziswa kwamaprotheni noma izithasiselo. Izithasiselo ezisetshenziswayo
ezisekela ukukhula kwemisipha
I-branched chain amino acid (BCAA)
Amathiphu wokwehlisa isisindo
7. Yidla Ukudla Okujwayelekile Yidla njalo futhi ugweme ukweqa ukudla, okungathinta kabi izinzuzo zokuzivocavoca kwakho ngokubangela ukulahleka kwemisipha. Ukwakha imisipha kusiza ukusheshisa ibolism yakho, esiza ekwehliseni isisindo.
8. Cabanga Ukudla okuthile
Ukushisa amafutha, khetha
ukudla okukhuthaza ukwehla kwesisindo
. Lokhu kufaka phakathi i-lImikhiqizo yobisi enamafutha aphansi, upelepele oshisayo nezinhlamvu ezigcwele. Izinketho zamaphrotheni zifaka
izinhlanzi ezinothe ngama-omega-3 fatty acids
, afana ne-salmon, i-mackerel, ne-tuna. Noma hamba uyofuna inyama enciphile njenge-turkey, inyama yengulube noma ibele lenkukhu.
Amathiphu emisipha ebabayo
9. Khumbula ukwelula Faka inqubo yokwelula ngemuva kokuzivocavoca ngenkathi imisipha yakho isafudumele. Kuyasiza ukukhulisa imisipha, ukunciphisa ukungezwani, nokuthuthukisa ukuguquguquka. Ukwelula kusiza futhi ekuvikeleni ubuhlungu bemisipha, kunciphise ukungezwani, futhi kwandise uhla lwakho lokunyakaza. Lokhu kuthuthukisa ukuhamba, kuthuthukisa ukuma okuhle futhi kuthuthukise ukuphumula kwemisipha.
10. Jabulela i-Cool Shower
Thatha ishawa epholile noma ebandayo ukukhuthaza ukwelashwa, ukuvimbela ukuvuvukala nokuqeda ukuqina kwemisipha. Ungakwaziungazama futhi
, okunganciphisa ubuhlungu bemisipha nokuvuvukala. Kungakusiza nokuthi uthole ukulala ubusuku obunokuthula.
11. Zama ikhambi lasekhaya Ezinye izinketho zokususa noma zokuvimbela imisipha ebuhlungu zifaka ukugeza kasawoti i-Epsom, ukubhucungwa, noma ukugingqika amagwebu. Uma uzizwa ukhathele, unezinhlungu, noma uhlushwa yiluphi uhlobo lokulimala, phumula ngokugcwele uze uzizwe ungcono.
Linganisa ukukhetha kwakho kokudla. Qiniseka ukuthi wondla umzimba wakho ngaphandle kokudla ama-calories amaningi. Akudingekile ukuthi uzincishe noma yini. Gwema ukweqa ama-calories noma ukweqa ukudla ngokuphelele. Kubalulekile futhi ukuthi ungadli ngokweqile noma uthole amakhalori akho ekudleni okusetshenzisiwe okungenampilo.
Melana nesifiso sokusebenza ngokweqile ngokuzicindezela ngokushesha okukhulungokuqinile noma ngaphezu kwezinga lakho lamanje. Lokhu kungaholela ekuhluphekeni nasekulimaleni. Kungadala futhi nokuthi
, ikakhulukazi uma wenza ukuzivocavoca okunamandla, oku-bouncy, noma okufudumalayo. Noma uma uqeda ukujima kwakho ngokungazelelwe.
Ukuvimbela ukuphefumula kwakho noma ukukhohlwa ukuphefumula ngesikhathi nangemva kokuzivocavoca kungadala isiyezi
noma ikhanda elikhanyayo. Lokhu kungenxa yokushoda komoya-mpilo ebuchosheni. Prakthiza izivivinyo zokuphefumula ezijulile lapho uphumule ngaphambi kokuzifaka ekusebenzeni kwakho. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa izindlela zokuphefumula ezinempilo nokuqwashisa ngokuphefumula.
Uma ungalandeli inqubo ejwayelekile yokuzivocavoca yenza
Ukuze uthole okuningi ekuzivocavoca umzimba kwakho, kubalulekile ukuhlonipha nokondla umzimba wakho ngokulandela uhlelo lokuzivocavoca emva kokuzivocavoca kanye nohlelo lokudla. Kukugcina uphilile emzimbeni nasengqondweni. Uma ungalandeli i-e post-workout routine, uba sengozini yokulimala noma ukukhathala. Ngokwengeziwe, kungaba nzima kakhulu kuwe ukunamathela kuhlelo lokuzivocavoca noma ube namandla wokuqedela imisebenzi yakho yansuku zonke.
Ngezinye izikhathi ungaphambuka esimisweni sakho sangemva kokuzivocavoca. . , kepha kukonke, kufanele uthathe izinyathelo ezifanele kaningi ngangokunokwenzeka.
Kubalulekile futhi ukuthi ulalele umzimba wakho futhi uthathe ikhefu uma uzizwa ugula, ukhathele noma usezinhlungwini ngemuva kokuzivocavoca. Ukuze wenze ezingeni lakho elilungile ngokuzayo lapho uzivocavoca umzimba, udinga ukuqinisekisa ukuthi umzimba wakho uyabuyiselwa futhi uvuselelwe. Lokhu kuvumela umzimba wakho ukuthi usebenze ngokusemandleni awo, okwenza kube lula kuwe ukwenza imisebenzi yakho yansuku zonke.
Uzozizwa ungcono ngokomzimba futhi uzithuthukiseinhlalakahle jikelele, engaba nomthelela omuhle kuzo zonke izingxenye zempilo yakho.
Kunini lapho kufanele ukhulume nochwepheshe
Cabanga ukusebenza nomqeqeshi uma umusha ngokomzimba noma uma unezinkinga ezithile zempilo, okubandakanya ukulimala. Isazi sokuzivocavoca umzimba singakha uhlelo olulodwa olwenzelwe izidingo zakho nezinhloso zakho. Bazokukhombisa nendlela ongayilandela ngemuva kokuqeqeshwa. Njengoba uthuthuka, umqeqeshi angenza ushintsho enkambisweni yakho ukuze uqhubeke nokuthuthuka.
Ingcwethi yokudla ingahlola izidingo zakho ngazinye ngokubheka imikhuba oyidla manje, uhlelo lokuqeqesha kanye nemiphumela elindelekile. Bazoklama uhlelo lokudla olufanele olugcwalisa uhlelo lwakho lokuqina, imingcele yokudla, noma ukukhathazeka kwezempilo. Ukubonana nodokotela wezokudla nakho kungakusiza.ikusiza uzizwe ukhuthazekile futhi usekelwa njengoba usebenzela ekwenzeni ngcono isikhathi eside.
Kufanele usebenzise inqubo yokutakula ngemuva kokuzivocavoca ukuze uthole izinzuzo eziningi futhi unikeze imisipha ithuba lokuphulukisa. Ngaphezu kwalezi zinyathelo eziphakanyisiwe, thola ukulala okuningi, okuzosiza ukuthuthukisa ukusebenza kwakho nenqubo yokutakula. Zinike ithuba lokuphumula ngokugcwele noma kunini lapho uzwa isidingo.
Dala inqubo yokutakula emva kokuzivocavoca evumela ukuthi ubuyise ngokuphepha amazinga wamandla futhi wakhe kabusha imisipha. Uma uzithola ulula kakhulu noma uqinile ngenkambiso yakho yangemva kokuzivocavoca, lungisa ngokufanele.